काठमाडौं । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको निर्देशन अनुसार नेपाल प्रहरीले भीआईपी र उच्च सुरक्षा निकायका अधिकारीका घरमा नियमविपरीत रहेका सयौं सुरक्षाकर्मी फिर्ता ग¥यो । भीआइपीको सुरक्षा व्यवस्थाका लागि बनाइएको कार्यविधिविपरीत राजनीतिक दलका नेतादेखि ब्यापारीसम्मलाई दिएका सुरक्षाकर्मी र सवारी चालक प्रहरीले फिर्ता गर्न सुरु ग¥यो । तर सशस्त्र प्रहरी बलका आइजीपी शैलेन्द्र खनालले प्रहरीले सुरक्षाकर्मी फिर्ता गरेका भीआइपीहरुको घरघरमा गएर आफूले पुन पठाउने भन्दै चाकरी गर्न थालेको स्रँेत स्रोत बताउछ ।
सशस्त्रका आइजीपी खनालले नेपाला प्रहरीको सुरक्षा लिने संबैधानिक निकाय पदाधिकारीदेखि नेताहरुकोमा पनि ‘प्रहरीले फिर्ता गरेछ, म सशस्त्रबाट पठाउँछु’ भन्दै सुरक्षाकर्मी र सवारी चालकसमेत दिन थालेको खबर छ । स्रोत भन्छ, सशस्त्रको आइजीपी सचिवालयमा काजमा तान्दै उनले नेता, संवैधानिक निकायका पदाधिकारी र शक्तिकेन्द्रमा सुरक्षाकर्मी उपलब्ध गराउन थालेका छन् ।
मुख्यमन्त्रीहरूले प्रदेशमा सुरक्षाकर्मी अभाव भएको गुनासो गरेपछि प्रधानमन्त्री ओलीले २०७४ चैत ७ मा भीआईपीका सुरक्षाकर्मी फिर्ता गर्न निर्देशन दिएका थिए । तर प्रधानमन्त्रीको निर्देशनको पालना गर्दै प्रहरीले सुरक्षाकर्मी फिर्ता गर्ने तर सशस्त्रले दिने गरेको छ । सशस्त्र प्रहरी बलका आइजीपी खनालले नेपाल प्रहरीले सुरक्षाकर्मी फिर्ता गरेको थाहा पाउनासाथ चाकरी गर्न पुग्ने र भोलिपल्टै पठाउने गरेका छन् ।
सशस्त्र प्रहरीको गठन बडीगार्डका रुपमा नेता वा ब्यापारी ठेकेदारको घरमा सुरक्षा गर्नका लागि गठन भएको होइन, अर्धसैनिक बल हो । तर शैलेन्द्र खनालले यसलाई अर्धसैैनिक बलको रुपमा होइन, निजी सेक्युरिटी कम्पनी जस्तै बनाएको आरोप छ ।
सशस्त्र प्रहरी सुरक्षा निकाय हो । त्यसका आफ्नै नीति नियम छन् । ती नीति नियमभित्र रहेर सशस्त्र प्रहरी परिचालन गर्नुपर्ने हो । तर, सशस्त्रका आइजीपी खनालले प्रहरीले नियम विपरीत भनेर सुरक्षाकर्मी फिर्ता गरिएकाहरुको घर घरमा तुरुन्त पठाउन तल्लीन छन् ।
सशस्त्र आइजीपी खनालले उनका सा“ढु स्वच्छन्द निर्माण सेवाका संचालक जयराम लामिछानेलाई सवारी चालक र पीएसओ दिएको खबर छ । लामिछाने निर्माण ब्यवसायी महासंघका पूर्वअध्यक्ष पनि हुन् । फोर्सको दुरुपयोग गर्दै ठेकेदार लामिछानेलाई उनले सुरक्षाकर्मी र चालक उपलब्ध गराएको स्रोतले बताएको छ ।
त्यसैगरी, ब्यापारी उपेन्द्र महतोलाई नेपाल प्रहरीले दिएको सुरक्षाकर्मी उनलाई कुनै थ्रेट नभएकाले फिर्ता ग¥यो । तर पावर ब्रोकरका रुपमा चिनिने महतोलाई आइजीपी खनालले तुरुन्तै सशस्त्र प्रहरीबाट गार्ड र ड्राइभर पठाइदिएका छन् । विवादास्पद कांग्रेस सांसद अमरेशकुमार सिंहलाई उनले फेरि सुरक्षाकर्मी दिएका छन् ।
यसअघि धेरै विवाद भएपछि उनले फिर्ता लिएका थिए । अहिले पुनः पठाइसकेका छन् । त्यसका अलावा नेपाली कांग्रेसका नेता प्रकाशमान सिंह, डा. प्रकाशशरण महतलाई पनि सुरक्षाकर्मी र चालक दिइरहेका छन् ।
सशस्त्र प्रहरी संगठनका सयौं सुरक्षाकर्मी र सवारी चालकहरुलाई खनालले आइजीपी सचिवालयमा काजमा राखी नेता र भीआइपीहरुको चाकरीमा पठाउने गरेका छन् ।
स्रोतका अनुसार सचिवालयमा काजमा राखिएका सशस्त्र प्रहरीको विवरण माग्ने हो भने सुरक्षाकर्मी कसरी दुरुपयोग गरिएको छ भन्ने छर्लङ्ग हुनेछ । रेकर्डमा नदेखाई उनले नेतादेखि विभिन्न ब्यक्तिलाई नियमविपरीत सुरक्षाकर्मी र चालक दिने गरेको स्रोतको दाबी छ ।
सशस्त्र प्रहरीको दुरुपयोग गरी नेतादेखि ब्यापारी, ठेकेदार र बीचौलियाको घर घरमा सुरक्षाकर्मी र चालक पठाउने खनालले गर्दा नेपाल प्रहरीलाई पनि समस्या परेको चर्चा सुनिन्छ । प्रहरीका एक अधिकारीको दुखेसो छ –‘प्रधानमन्त्रीको निर्देशन अनुसार नियमविपरीत दिइएका सुरक्षाकर्मी फिर्ता लिइयो । तर हामीले फिर्ता गरेको भोलिपल्टै सशस्त्रले दिएपछि संवैधानिक निकायका पदाधिकारीहरु प्रहरीस“ग रुष्ट भए । एउटा निकायले फिर्ता गर्ने अर्को निकायले दिने हुनुभएन । आखिर दुवै सुरक्षा निकायमध्ये जहाँबाट दिए पनि सरकारी स्रोतको दुरुपयोग नै हो ।’
काम कुरो एकातिर कुम्लो बोकी अमेरिकातिर
केपी ओली नेतृत्वसको सरकारले सीके राउतलाई शान्तिपूर्ण राजनीतिमा अवतरण गराएपछि मधेश विगत बर्षको तुलनामा शान्त छ । तर पहाडी क्षेत्रमा नेत्रविक्रम चन्द विप्लवको पार्टीले छिटफुट रुपमा बम राख्ने, जनप्रतिनिधि र कर्मचारीलाई कालोमोसो दल्ने गरिरहेको छ ।
विप्लव माओवादीको गतिविधिलाई मध्यनजर गरी गृहमन्त्रालयले प्रमुख जिल्ला अधिकारी र प्रहरी प्रमुखलाई जिल्ला नछाड्न निर्देशन दिएको छ । तर राजमार्ग सुरक्षाको जिम्मेवारी प्राप्त सशस्त्र प्रहरी बलका आइजीपी शैलेन्द्र खनाल भने १५ दिन बिदा लिएर अमेरिकाको सयरमा निस्किएका छन् । उनका छोरा सानिन्ध्य खनाल अमेरिकामै छन् । बीचमा छोरालाई नेपालमा बोलाएर नेकपा अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालकी नातिनी स्मितास“ग गीतमा मोडलिङ गराएका थिए ।
गृहमन्त्रालयले जिल्लाका प्रजिअ र एसपीलाई एलर्ट रहन निर्देशन दिने तर, गृहमन्त्री रामबाहदुर थापाले भने सशस्त्र प्रहरीका प्रमुखलाई भने १५ दिनसम्म घरबिदा लिएर अमेरिका भ्रमणमा जान छुट दिएका छन् । छोरा अमेरिकामै भएकाले खनाल अमेरिकामा घरबिदा मनाउन गएको बताइएको छ ।
प्रशासनका उच्चअधिकारीदेखि सुरक्षा निकायका उच्च अधिकारीसम्मले नेपालमा भ्रष्टाचार गरी आर्जित सम्पत्ति सबै अमेरिकामा लगी फ्ल्याट खरीददेखि ग्यास उद्योगमा लगानी गर्ने गरेका समाचारहरु बारम्बार आउने गरेका छन् ।
नेपाल प्रहरीको अस्पतालमा प्राविधिक प्रमुख हुन्छन् । प्रशासनतर्फ डीएसपीको दरबन्दी हुन्छ । ७६ हजार दरबन्दी भएको नेपाल प्रहरीको अस्पतालको प्रशासनमा डीएसपी भए पुग्ने तर ३७ हजार २ सय संख्याको सशस्त्रले सशस्त्र प्रहरी अस्पतालमा एसएसपी लगेर राखेका छन् ?
बार्षिक करीब ३० करोड भन्दा बढी उपकरणदेखि औषधिको बजेट हुने भएकाले त्यसको खरीदमा कमिसन खान प्रशासनका एसएसपी हरिशचन्द्र अधिकारीलाई लगेको आरोप छ । अस्पतालमा ठूला खरीद हुने भएकाले कमिसनमा कुरा मिलाउन एसएसपी अधिकारीलाई आइजीपी खनालले पदबहाली गरेलगत्तै लगेको आरोप लागेको छ ।
यसअघि सशस्त्रको अस्पताल प्रशासनमा चिकित्सक नै प्रमुख हु“दैआएका थिए । तर खनालले सबै विधि मिचेर अधिकारीलाई हर्ताकर्ता बनाएका छन् । सशस्त्रको अस्पतालमा उपकरण आपूर्तिको एकाधिकार बायोमेड इन्टरनेशनलका चेतन अग्रवालले पाउने गरेका छन् ।
जसमा करोडौं कमिसनको चलखेल हुने गरेको स्रोत बताउछ । यसअघि सशस्त्रको अस्पतालमा प्रशासनबाट इन्स्पेक्टरलाई खटाउने चलन थियो । कल्पना खड्का अस्पतालमा लामो समय बस्ने सशस्त्रकी इन्स्पेक्टर हुन् ।
सशस्त्रका आइजीपी खनालको बायोमेड इन्टरनेशनल नामक उपकरण आपूर्ति गर्ने चेतन अग्रवालसंग विशेष सम्बन्ध रहेको स्रोत बताउछ । सशस्त्रले स्पेसिफिकेसन बनाउँदा नै अग्रवालको कम्पनीबाटै उपकरण खरीद गर्नेगरी बनाउने गरेको बताइन्छ ।